Fanaterana mangarahara eo amin'ny jono: Namoaka lisitry ny sambo i Madagasikara - Blue Ventures
Nanao dingana lehibe ho amin'ny mangarahara ny jono ny Governemanta Madagasikara tamin'ny famoahana a lisitry ny sambo indostrialy nahazo alalana hanjono amin’ny ranon’ny firenena.
Ity lisitra ity, izay mirakitra antsipirihan'ny sambo 39 navela hisambotra makamba ho an'ny taom-pilalaovana 2022, no andiany farany amin'ireo fanoloran-tena mikendry ny hiantohana ny hoavy maharitra kokoa ho an'ny jono ao amin'ny firenena nosy.
Tato anatin’ny volana vitsivitsy izay, niharan’ny famoretana i Madagasikara trawling ambany manimba amin'ny rano amoron-tsiraka ary lasa firenena fahadimy nanatevin-daharana ny Hetsika mangarahara amin'ny jono, ny fenitra voalohany manerantany momba ny mangarahara sy ny fandraisana anjara amin'ny jono.
Ny mangarahara momba ny jono dia nampiakatra ny fandaharam-potoan'ny ranomasina tato anatin'ny taona vitsivitsy ary heverina ho zava-dehibe amin'ny fanatrarana ny tanjon'ny Firenena Mikambana momba ny fampandrosoana maharitra 14 mba hiarovana ny fiainana anaty rano.
“Ny fampitomboana ny fisian'ny angon-drakitra momba ny jono azo itokisana sy marina no fototra iorenan'ny fitantanana ny jono mandray andraikitra sy miombona antoka. Ivon'ny ezaka amin'ny fanarenana ny jono, ny famerenana amin'ny laoniny ny fiainana an-dranomasina ary ny fananganana lalana maharitra mankany amin'ny fanambinana ho an'ny vondrom-piarahamonina mpanjono.s”, hoy ny Dr Hajaniaina Ratsimbazafy, Talen’ny Conservation de Madagascar, Blue Ventures.
Maneran-tany, dia olona maherin’ny iray lavitrisa no miantehitra amin’ny trondro ho loharanon’ny proteinina, ary an-jatony tapitrisa no miantehitra amin’ny jono ho fivelomany.
Saingy amin'ny fotoana izay ilain'ny mponina eran-tany mihamitombo ny proteinina ambany karbôna maharitra kokoa noho ny hatramin'izay, ny ampahatelon'ny tahirin-trondro no trandrahana be loatra. Any amin'ny toerana toa an'i Madagasikara, ny tontolo an-dranomasina dia tandindomin-doza kokoa noho ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fanjonoana tafahoatra noho ny tamin'ny fotoana rehetra teo amin'ny tantara maoderina, ary mihamaro ny mpanjono – anisan'izany ireo sambo manao jono tsy ara-dalàna, tsy voatanisa ary tsy voafehin'ny lalàna – mifaninana amin'ny fihenan'ny haza.
Izany no mahatonga ny vaovao ara-potoana, mazava ary azo ampahibemaso momba ny hoe iza no manarato, ny toerana sy ny zavatra azony dia tsy nanan-danja intsony.
“Mankasitraka ireo ezaka farany hampandrosoana ny mangarahara momba ny jono eto Madagasikara izahay”, hoy i Annie Tourette, lehiben’ny Advocacy Blue Ventures. "Ny fampahalalam-baovao tsara kokoa dia manatsara ny fandraisan'anjaran'ny daholobe sy ny fandraisana fanapahan-kevitra ary amin'ny farany dia manome fitantanana tsara kokoa sy ho avy maharitra ho an'ny harena an-dranomasina sy ny vondrom-piarahamonina izay miantehitra amin'izany."
Sary: Sambo mpanjono makamba 'Cap Saint André', iray amin'ireo sambo 39 nomena alalana amin'ny taom-panjonoana 2022 eto Madagasikara, izay an'ny orinasa mpanjono REFRIGEPECHE Ouest | Loharano sary: ​​JMI
Vakio bebe kokoa momba ny asan'ny BV momba ny jono indostrialy eto:
Fikarohana vaovao: porofo ara-tsiansa voalohany momba ny fanjonoana tafahoatra amin'ny jono madinika eto Madagasikara
Blue Ventures dia manatevin-daharana ny fanentanana manerantany amin'ny #StopFundingOverfishing
Raha mila fanazavana fanampiny, dia mifandraisa: Anne Guillaume— [email voaaro]
fitantanana ny jono, Madagasikara, mangarahara